Fiermada 2018: hita ny fanodinam-bokatra, saingy tsy ampy tohana | NewsMada
Fiermada 2018: hita ny fanodinam-bokatra, saingy tsy ampy tohana
Par Taratra sur 06/08/2018
Hita taratra teny amin’ny Fiermada ny vokatry ny fanodinam-bokatra avy amin’ny fambolena sy ny fiompiana ataon’ny tantsaha na fikambanana samihafa. Tranoheva maro samy nampiseho ny zava-bitany, ny 1 hatramin’ny 5 aogositra teo teny amin’ny kianjan’ny Makis, Andohatapenaka.
Miandry tohana avy amin’ny mpanjifa ny tantsaha mba hanjifa ny tena vita malagasy ; mila tohana ihany koa avy amin’ny fanjakana, indrindra ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana. Tokony harovana ny vita malagasy manoloana ny fitosahan’ny vokatra avy any ivelany, raha ny sakafo, ao ireo efa misy lany andro.
Tsy vitsy amin’ireo mpandray anjara no naneho ny heviny momba ny lalam-barotra. Saingy ny olana, eo ihany ireo vokatra tsy manara-penitra manaporofo ny tsy maha matihanina ny mpandraharaha amin’ity sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ity. Hita izany, ohatra, amin’ny fomba famonosam-bokatra, miankina amin’ny mpanodina azy ; etsy andaniny, lasa sakana ho an’izay tsy fanaraham-penitra izay koa ny fahalafosan’ny herinaratra sy ireo fitaovana samihafa hoenti-miasa.
Faharatsian-dalana sy tsy fandriampahalemana
Olana iray lehibe, efa fantatra hatry ny ela koa ny faharatsian-dalana tsy mahatafavoaka ny vokatra. Misy ihany ny fifanarahana eo amin’ny orinasa mpanodina ny vokatra sy ny tantsaha mpamokatra fa noho io antony faharatsian-dalana io ny mampikatso izay fiaraha-miasa izay. Eo koa ny lafiny tsy fandriampahalamena, mamono antoka ny tantsaha, hatramin’ny ainy mihitsy aza.
Betsaka ny mifampiankina vao mahita fahombiazana, koa vahaolana iray ny “Tranoben’ny tantsaha”, azon’ny rehetra idirana, ny tantsaha, ny orinasa, ny kaoperativa, ny fikambanana, sns. Ao ny hifanakalozam-baovao sy traikefa, hifandraisana amin’ny fanjakana mba handraisan’izy ireo fepetra, raha tsy atao fitaovana politika fotsiny indray ny hoe fampandrosoana ny any ambanivohitra.